Qasabadda Musqusha ee Dahaarka leh ee Dheecaan -Biyo -soo -baxa ah - WOWOW
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW 2 Qaado Qasabad Musqusha oo Si Balaadhan u Fidsan oo Qubeysa Musqusha oo leh Qoob-ka-Biyo-baxa
Faa'iidooyinka qasabadda dahabiga ah ee ballaadhan ee dahabka ah oo kooban:
Casriga Casriga ah & Fudud ee Basin-ka: Dhameystir caday oo dahabi ah ayaa musqushaada ka dhigi kara mid sharaf leh oo qurux badan waxayna kaa caawineysaa inaad iska caabbiso daxalka iyo miridhku nolol maalmeedkaaga.
3-Hole Mount Oo leh 6-14 inji Naqshad ballaadhan: Masaafada rakibaadda waxaa lagu hagaajin karaa shuruudaha weelka. Kaydinta dhoobada dhoobada ah ee lagu xidho iyo biyo-badbaadin.
Easy in ay isticmaalaan: Laba gacmeed, 360 darajo ayaa isku shaandheyn ku sameeya naqshad heer sare ah, xakameyn sax ah oo sax ah mugga iyo heerkulka biyaha. Qalabka kaydadka dhoobada ee dhoobada leh oo leh waxqabadka ka hortagga-faleebada iyo hawo-hayaha biyaha ee NEOPERL waa la qalabeeyay.
Easyilaa Ku rakib: Qaab-dhismeedka dhaqso-isku-xirnaanta asalka ah waa fududahay in la rakibo, adiguna waad rakibi kartaa qasabadda weelka adiga oo aan tuubbo tuubin. Keydso khidmadda rakibidda tuubooyinka! Xirmada waxay la imaaneysaa isku xirnaanta bullaacadaha iyo khadadka biyo siinta cUPC.
WOWOW Dhawaan Casriyaysan Musqusha Dahabka Dahabka
FAAFIN & BARNAAMIJ LA HELI KARO
Waxay ku habboon tahay berkedda musqusha ee 6 - 16 inji.
Ka samaysan naxaas heer sare ah oo lagu soo bandhigay naqshad casri ah.
Naqshadeynta laba-gacmeed waa sahlan tahay in la xakameeyo mugga biyaha iyo heerkulka
Raaxo muhiim ah oo dusha sare laga caddeeyay oo dahab ah oo leh naqshad dusha sare leh. Waa ikhtiyaar ku habboon inaad cusbooneysiiso musqushaada.
Waxay ku habboon tahay guri kiro ah, kondho cusub, hal guri, guri mooto ah, taraafikada safarka, RV saxanka, iyo isticmaalka qoyska.
Kaydadka naxaasta Gaarka ah
Dhisida naxaas adag
8 Inches oo Fidis ah
3 Hock dekk Mount
Aorator-wax-qabad sare leh ayaa bixin kara qulqulka socodka, wuxuu keydin karaa in kabadan 50% biyo.
Waxay la timid Khadadka Biyo-gelinta Tucai
Tuubbooyinka biyaha siiya ee Tucai oo ay ku jiraan malaayiin doolar caymiska caalamiga ah.
Macdanta `` Lead-free '' (oo ka yar 0.25% maadada leedhka), cUPC ee IMPAO, NSF 61 (Saamaynta Caafimaadka ee Biyaha).
1 x Qulqulka qaansada sare; 2 x Gacan
1 x Y qaab ah tuubada isku xiraha degdega ah
2 x 50 cm cUPC Tuubooyinka biyaha;
1 x Buuxiya joojiye bullaacad ah
SKU: 2320300G Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: 2 Gacmaha, tubada qasabada musqusha, Fidsan